कुखुरापालन व्यवसाय संकटमा - eagronews.com
कुखुरापालन व्यवसाय संकटमा
कृषि समस्या विचार
By admin १६ चैत्र २०७६, आईतवार १०:५०
कंचनपुर जिल्लामा कुखुरापालन व्यवसाय सङकटमा परेको छ । खोरमा उत्पादित कुखुरा लकडाउनका कारण बिक्री ठप्प हुनुका साथै दानाको अभाव भएपछि कुरापालन व्यवसाय नै संकटमा परेका छन् । दाना अभाव ले गर्दा किसान हरुले चामल, मकै आदी अन्न खुवाउने गरे पनि हाल ती वस्तुको अभावले गर्दा तयारी कुखुरा अब खाल्डोमा पुर्नु बाहेक अरु उपाय केहि छैन ।
अहिले कंचनपुर जिल्लामा मात्रै ३ लाख ८० हजार तयारी ब्रोईलर कुखुरा झण्डै १० लाख ६४ हजार किलो रहेको र कुखुरा उठाउन नपाउदा किसान मरिरहेका छन् । दाना ढुवानी गर्ने र कुखुरा उठाउन दिने वाताबरण सिर्जना नभए कुखुरा खाल्टोमा गाडेर साद्धे नहुनुका साथै त्यसको दुर्गन्धले भयावह रोग निम्तिन बेर छैन ।
यस्तो अवस्थामा कुखुरा तथा अन्डा उत्पादन किसान संघ कंचनपुर यो पनि माग राख्दछ कि सरकारले किसान को खोर मा भएको कुखुराको तथ्यांक संकलन गरियोस र भविश्यमा उचित क्षतिपूर्तिप्रदान गरियोस । यात तयारी कुखुरा ढुवानी मा सहज गरियोस । सरकारले लकडाउनको बेला दाना र चल्ला ढूवानी गर्न दिने बताए पनि कुखुरा उठाउन नदिदा दलालीहरुले चलखेल गरेको बुझाई छ ।
सरकारले किसानबाट उत्पादन भएको कुखुरा आयात निर्यात रोकेको अवस्था छ । ह्याचरीबाट उत्पादित चल्ला मुलुकभरि लगेर बेच्न पाउने ! चल्ला बोक्ने गाडीले कोरोना नसार्ने ? तर कुखुरा बोक्दा कोरोना सर्ने ? यो कस्तो नीति, छक्क परेका छौं । ह्याचरीबाट उत्पादित चल्ला र कुखुरा बोक्ने एउटै मापदण्ड हुनु पर्ने हो ।
कोरोनाभाइरस : पसलका खानेकुरा सुरक्षित रूपमा कसरी किन्ने ?
‘लक डाउन’को अवधिमा कृषि क्षेत्रमा गरिनु पर्ने कामहरु
Padam shah says:
Mero pani 25000 challa dana npayer Marne vo.
New prabhat fresh House Poultry farm tikapur(samkarpur’) kailali
Aba K garne hola.